8 nuuc oo cuntooyin ah oo ilaalinaya caafimaadka beerkaaga - Horn Future
Marka la eego doorka muhiimka ah ee uu ku leeyahay jidhka bini’aadanka, iyo hawlaha lagama maarmaanka ah ee la xidhiidha habka dheef-riddiqqa,nidaaminta heerka sonkorta ee dhiiga,ka saarida sunta jidhka iyo hawlaha kale ee ilaaliya caafimaadka dadka,waxa lagama maar maan ah in mudnaan gaar ah la siiyo beerka iyo in la sii wado ilaalinta caafimaadkiisa in la’eeg sida wadnaha loo ilaaliyo.
Waxa uu raadeeyaa nidaamka cunto ee aanan caafimaadka qabin hab nololeedka kaasoo saamayn xun ku yeesha oo dhibaato leh beerka, taas oo ka dhigaysa in loo nuglaado cuduro badan, sidaa darteed waxa inagu waajib ah in aan raacno nidaam cunto oo caafimaad leh oo ka shaqeeya ka sifeeynta sunta ee beerka si uu u oofin karo howlihiisa ilaa xad si buuxda si bini’aadanku ugu raaxeeysto caafimaad wanaagsan.
Si loo hubiyo caafimaadk beerka sida ugu habboon, waxaa jira siddeed nuuc oo ka mid ah cuntooyinka oo ay waajib tahay in la quuto sida laga soo xigtay website, “Bold Sky” oo khuseeya caafimaadka, waana sidan soo socota:
Si aad u hesho beer caafimaad qaba ku dadaal inaad cunto tufaaxa maalin kasta,sababtoo ah midhahan waxa ay hodan ku yihiin maadada (Pectin) oo hodan ku ha habka dheef-riddiiqqa taasoo ka saaraysaa sunta nidaamka dheef-riddiqqa,yaraynaysana tirada sunta ee ku ururta beerka.
2. Beets ama baytaraaf
Midhaha beets ama loo yaqaano baytaraafka waxa ku jira maadooyinka (flavonoids) ee dhirta iyo (beta-carotene),sidaa daraadeed waa mid wanaagsan oo wanaajinya waxqabadka beerka, marka lagu daro in uu door ku leeyahay sifeeynta dhiigga, sidaa daraadeed waxa lagu talinayaa in lagu daro salaadka ama casiir ahaan loo cabo.
Toontu waxay ka shaqeeysaa sifeeynta beerka iyada oo kicinaysa maadada loo yaqaano (enzymes) ee xubintan muhiim ka ah, sidoo kale waxa ay hoos u dhigtaa heerka cholesterol ka baruurta sadex-geesoodka ah ee loo yaqaano (triglycerides) taasoo ay dhici karto in ay waxyeelayso beerka,si loo helo natiijooyin fiican isku day inaad cunto toon qaydhiin ah.
Cunista midhaha avocado waxa ay jidhka ka caawiyaan in uu sii daayo nuuc ka mid ah maadada (antioxidant) ka ee loo yaqaano “glutathione” taas oo uu ka faa’iideysto beerku si uu u baabi’iyo sunta iyada oo sido kale wanaajisa guud ahaan howl-qabadkiisa,halka baruurta loo yaqaano (monounsaturated) ee ku jirta midhahan ay ka shaqeeyaan sifeeynta beerka iyo in ay yareeyaan baruurta (cholesterol)ka ee xun.
Sidaa daraadeed waxa lagu talinayaa in la joogteeyo cunistiisa inta dhexeeya 1 ilaa 2 midho ah oo avocado ah toddobaadkii dhowr bilood waxana aad naf-ahaantada u arki doontaa farqiga.
Khudradda nuucan ah waxa ay kaa caawisaa in ay kor u qaado heerka maadada “Alglecosanolat” ee xubinta ka ah jidhka oo wax ka tarta fududeeydinta soo saarka maadada (enzymes) ee dheef-riddiqqa, iyo ka saarida sunta jidhka,taasoo ilaalisa caafimaadka beerka.
Midhaha loo yaqaano grapfruits oo bah-wadaag la ah liinta orange ta ayaa waxa ku jira tiro badan oo vitamin C ah iyo maadooyinka( antioxsidanter) taas oo ka dhigaysa cunisteeda in ay ka caawiso beerka in si dabiici ah ay u nadiifiso,laakiinse waxaa lagu talinayaa inaad la tashato dhakhtarkaaga ka hor cunisteeda joogtada ah haddii aad ku xidhan tahay daweeynta daawooyinka qaarkood.
7. Shaaha cagaar ka ah ama akhtarka ah
Shaah cagaarka ah waxa ku jira nuuc ka mid ah maadooyinka (antioxidant) ka taasoo caawisa wanaajinta hawlaha beerka, marka lagu daro doorka uu ku leeyahay ilaalinta qoyanaanta jidhka iyo baabi’inta baruurta.
Maadada( curcumin) ee laga helo geedka (turmeric) wax ay soo saartaa maadada( enzymes) taas oo ka shaqaysa cusboonaysiinta unugyada beerka,waxa sido kale ay sifeeysaa beerka,iyada oo sido kale wanaajisa awoodda jidhka ee dheef-riddiqaa.
Xigasho: Bold Sky
« La plupart des sachets de thé populaires contiennent des quantités illégales de pesticides mortels (évitez ces marques à tout prix)	» Russia oo ku hanjabtay in ay isticmaali doonto diidmada veto ga si ay uga hortagto in goobjoogayaal la geeyo Xalab.